MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 870
>Myanmar Press Award blocked by Burmese Regime
> ပ ဒို မန်း ရှာ သို့အောက် မေ့တ သ ချက်အောင် ဝေးဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၉ သောင်ရင်းကပြောင်းပြန်စီးလို့ ရတယ်။ နွေဦးကတည့်တည့်...
> ဆရာဒဂုန်တာရာအား ဂါရ၀ပြု နုတ်ဆက်ပွဲတာရာဝေယံဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၉“ရန်သူမရှိ၊ မိတ်ဆွေသာရှိမုန်းသူမရှိ၊ ချစ်သူသာရှိနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာရန်သူကို မိတ်ဆွေဖြစ်အောင် လုပ်တာ”ဆိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အယူအဆကို စွဲမြဲစွာ ခံယူထားတဲ့ ဆရာ ဒဂုန်တာရာဟာ ရန်ကုန်မှာ ဆောင်းခိုရင်း နွေဦးပေါက်လာပြီ...
>AungSan94.PDF Publish at Scribd or explore others: Other Brochures & Catalogs leader myanmar No tags for this post. Related...
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၉ ကြက်ခြေနီအသင်းများက နာဂစ်မိသားစု ၃ သောင်းကို ထောက်မည်။ စင်္ကာပူ ကျောင်းသားဗီဇာ ၅၀ %...
> အောင်ဆန်းသစ်ကောင်းအိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၉ အမေ့ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်ထဲက ကျနော့ရဲ့ ရော်ဘင်ဟု အမှန်တရားအားလုံးရဲ့သေနာပတိ ရုပ်တုထု ကိုးကွယ်ရမယ့် ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ တဆူသောဘုရား ၀ိမုတ္တိတရားဦးကို ဟောဖို့ ဥရုဝေလတောကို သူလာခဲ့တယ်။ ။...
> အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ အမှတ်တရမြတ်ကောင်းရဲ့ဒီဇိုင်းဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၉ “လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အထူး မေတ္တာရပ်ခံသွားချင်တယ်။ လူငယ်တွေဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ဘယ်လောက်လုပ်တယ် ဆိုတာလည်း လူအများအပြား သိကြတာပဲ။ လူကြီးတွေဆိုတာလည်း ဒီတိုင်းပြည်မှာ...
> လမ်းပြမြေပုံကို ဂန်ဘာရီနှင့် ဂျပန်ထောက်ခံ၊ မော်လဒိုက်သမ္မတ ကန့်ကွက်မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၄ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၉ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ကုန်ပိုင်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာဏာရပါတီ ကွန်ဂရက်ပါတီအကြီးအကဲ ဆိုနီယာဂန္ဒီနှင့် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေသော မော်လဒိုက် သမ္မတ...
> အမှတ်တရ ဗိုလ်ချုပ် (၁၉၁၅-၁၉၄၇)မာမာအေးဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၉ “ကိုးဆယ့်လေးနှစ်”ပြည်ချစ်‘ဖခင်’ရှိခဲ့ရင်ပေါ့။ ဖခင်ရယ် – –နယ်ချဲ့လက်ဝေသက်ချွေခဲ့စဉ်ဖလ်တွင်လျောင်းစက်အိပ်ပျော်လျက်သို့တသက်သည်ခါမြင်ဖူးပါလည်းမေတ္တာစင်လူးကျေးဇူးဂုဏ်အင်တွေးတိုင်းတင်မို့ဖခင်စံပြ‘ဗိုလ်တေဇ’လေ။ ဂီတအသည်းအကျည်းတန်မနှလုံးလှမယ်ကိုးကွယ်‘ငြိမ်းချမ်း’‘ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်’‘ဖလမ်းစဉ်’ ကြားခရီးသွားခဲ့၊ အားမနွဲ့။ လှုပ်လဲ့လှုပ်လီရင်ချီခါးသေးလှဆေးမဖော်မတော်တာတွေ့‘ဒေါင်းဓလေ့’နှင့်ကောင်းစေ့ချင်တိုင်းနှုတ်ရိုင်းမိမိ‘ဖသို့ရှိ’ခဲ့။ ‘ဖ’ မရှိလည်းရှိသည့်အလားထွန်စေနွားသို့တိုင်းကားပြည်မှုပြည်ထောင်စုနှင့်လူထုထဲမှာမေတ္တာအိမ်ဆောက်တယောက်ထီးတည်း‘ဖေကြီး’နောက်ပါးဇာနည်ဘွားလေးလိုက်ပေးတုန်းခါ‘မကွေး’မှာလေ။ သေတောင်မေ့ဘူးအဖြစ်ထူးကဲဖွင့်ဆဲ‘ကြေးရုပ်’‘ဖ ဗိုလ်ချုပ်’ကား‘ခလုတ်’လက်တင်မနှိပ်ခင်ကချိုမြငြိမ့်ညောင်းဆရာ့စောင်းဖြင့်ဂုဏ်ပေါင်းဇေယျာခစိမ့်ငှာလျှင်လင်္ကာရတုတေးနုသံလွင်ဝေဟင်ပျံဝဲဆိုဆဲကာလသမီးလှအားသနားပိုင်ပိုင်မစောင့်နိုင်ဟန်အားမာန်အပြည့်ထွက်ကြည့်သယောင်ကြံဆောင်ဖြစ်ခြင်းသည်အခင်းကိုခပင်ရှင်လူအူအူသောသောမိန်းမောနှုတ်ဟအမှတ်ရကြောင်းထပ်လောင်းတသ လွမ်းလိုက်ပါ့။...
>Zaw Gyi – Union Day Poem
> Zaw Gyi – Union Day Poem February 12, 2009 No tags for this post. Related posts No related...
> ၀င်းဖေ နဲႚ သူႚပန်းချီကားမဵား စီးရီး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Than Soe Hlaing – Burma, the NGO Country
> အန်ဂျီအိုတွေနေတဲ့ တိုင်းပြည် – မြန်မာပြည် သန်းစိုးလှိုင် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၉ နာဂစ်နဲ့ စခဲ့တယ် နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးနောက် ၂ ပတ် အကြာ ကာလ။ လပွတ္တာမြို့၏ လမ်းများပေါ်တွင်...
>a new book on Aung San
> ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစာအုပ်သစ် ၀ယ်ဖတ်နိုင်ပြီဓာတ်ပုံသတင်းဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၉မနက်ဖြန်တွင် ကျရောက်မည့် ၉၄ နှစ်မြောက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် စာအုပ်တအုပ် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ပိသုကာ စာပေတိုက်သို့ ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်သည်ဟု သိရသည်။ လိပ်စာမှာ...
> Remembering 62nd Anniversary of Burma Union Day Postcard created by Ko Myo (Art) February 12, 2009 No tags...
> မင်းသုဝဏ် နှစ် ၁၀၀ ပြည့် မွေးနေ့ပွဲကျင်းပတာရာဝေယံဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၀၉ ရာပြည့်ပွဲမြင်ကွင်း အမျိုးသားစာဆို ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်၏ နှစ် ၁၀၀ ပြည့် မွေးနေ့ပွဲကို ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့၊...
>Burmese Artists Community at Min Thu Wun 100 Years
> မင်းသုဝဏ် ရာပြည့်ပွဲ ရန်ကုန် မြင်ကွင်း မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၀၉ ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ ဆရာဒဂုန်တာရာ၊ ဆရာ ဇော်ဇော်အောင်နဲ့ ဆရာမင်းသုဝဏ်သားကြီး၊ ဆရာအမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများ No tags...
>Maung Yin Aung – Art is not for sale
> “အနုပညာကို ရောင်းမစားနဲ့ …” ဦးသုခ ဆုံးမစကားကို ပြောကြားသူ မောင်ယဉ်အောင် မိုင်အကယ်ဒမီစိန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၀၉ အကယ်ဒမီပွဲမှာ ဦးသုခ အမှာစကားကို ပြောခဲ့သူမှာ ကိုးဆယ်ဆသာလိမ့်မယ် ဇာတ်ကားရိုက်ကူးသူ ဒါရိုက်တာမောင်ယဉ်အောင်ဖြစ်ပါသည်။...
Page 870 of 937«1...868869870871872...937»